Wakiilada Beesha Caalamka oo labo qodob oo culus ah ula tagay Axmed Madoobe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wakiilada Beesha Caalamka oo labo qodob oo culus ah ula tagay Axmed Madoobe
A warsame 15 August 2019 15 August 2019
Wafdi uu hoggaaminayo Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa goor dhow gaaray magaalada Kismaayo, iyagoo wada dadaaladii u dambeeyay ee xal looga gaarayo xiisada siyaasadeed ee ka jirta doorashada Jubbaland.
James Swan oo ay socdaalkiisa ku wehliyaan Wakiilka Midowga Afrika, Ergey ka socda IGAD iyo Taliska AMISOM ayaa kulan saacado qaatay kula yeeshay xarunta Madaxtooyada Kismaayo Madaxweyne Axmed Madoobe, kuxigeenadiisa iyo Wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Amniga.
Kulankan ayaa waxaa looga hadlayay hannaanka ay u socoto doorashada Jubbaland iyo sidii ay u noqon laheyd doorasho xor iyo xalaal ah, lagana fogaado wax kasta oo keenaya fawdo iyo amni darro.
Ergayga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya James Swan ayaa Dowlad Goboleedka Jubbaland ka codsadey in fursad la siiyo Musharaxiinta mucaaradka si ay isu diiwaangeliyaan ugana qeybgalaan doorashada iyo in wax ka badal lagu sameeyo shuruuda lagu xirey musharaxiinta u tartameysa xilka madaxweynenimo ee Jubbaland.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa xubnahan ka socday Beesha Caalamka u sheegay in uusan isaga sharciyad u laheyn wax ka badalka jadwalka doorashada guddiga xuduudaha iyo doorashooyinkana ay u taallo howshaas.
Waxaa la isku raacay in gudiga Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland laga sugo jawaabta kama danbaysa ah ee la xiriirta hannaanka Doorashooyinka Jubbaland.
Sidoo kale wafdigan ka socda Beesha Caalamka ayaa wada xalkii u dambeeyay, waxaana la sheegayaa in dadaalada ugu badan ee socda ay dowladda Federaalkana gadaal ka riixeyso, taasoo ah sidii Musharaxiinta mucaaradka looga qeyb gelin lahaa doorashada.